Accueil > Gazetin'ny nosy > Antoko Monima: « Itataovan-doza izao i Madagasikara »
Antoko Monima: « Itataovan-doza izao i Madagasikara »
Nitafa tamin’ny mpanao gazety omaly ny sekretera jeneralin’ny antoko Monima, Gabriel Rabearimanana. Izy izay nanoritsoritra ny fomba fahitan’ireo mpikambana ao amin’ny birao foiben’ny Monima ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny.
Nomarihiny sy notsiahiviny aloha fa « tamin’ny volana jona 2015, taorian’ireo latsa-bato fampitsaharana tamin’ny asany ny filohampirenena Rajaonarimmapianina teny amin’ny Antenimierampirenena ireny ka nankatoavin’ny depiote maro an’isa dia efa nampaneno lakolosy fanairana ny filoha nasionalin’ny Monima, Monja Roindefo, ary nanipika fa tapaka ny fifanarahana ara-tsosialy (contrat social) teo amin’ny vahoaka sy ny fitondram-panjakana Rajaonarimampianaina, ary miditra ao anatin’ny krizy vaovao indray ny firenena satria sempotry ny voka-dratsin’ny tsy fahaiza-mitantana sy ny fanamparam-pahefana ny vahoaka ».
Nisy 75 ny mpikambana avy amin’ny komity foiben’ny Monima avy amin’ny faritra isanj-tsokajiny eran’ny Nosy no nivory teto Antananarivo tamin’ny volana may 2017, hoy hatrany i Gabriel RAbearimanana, ary namaofivaofy ny tontolon’ny raharaham-pirenena koa. Tamin’izany dia nivoitra fa ny 90%-n’ny vahoaka malagasy dia miaina ao ambany fetra farany ambanin’ny fahantrana (en dessous du seuil de la pauvreté), ary mandry andriranantsy mandrakariva ny vahoaka noho ny tsy fandriam-pahalemana manafotra ny firenena, izay itrangan’ny famonoana olona, ny fakana an-keriny, ny fandrobana omby sy fananan’ny olom-pirenena, na an-tsaha na an-tanàna, ary tsy takona afenina ny fihanahan’ny kolikoly amin’ny seha-piainana ankapobeny. Tsy voafaritra intsony koa ny tsy fisian’asa, indrindra ho an’ny tanora, hoy ihany ity sekretera jeneralin’ny Monima ity. Raha akapoka, hoy izy dia potika tanteraka ny firenena amin’izao fotoana. Niala nenina niantso ny filohampirenena sy ny governemanta mba hikaroka vahaolana haingana hanavotana izao fahavoazana iray lavaka manjo ny vahoaka izao ny mpikambana ao amin’ny Komity nasionalin’ny Monima, hoy ny Pr Rabearimanana, nefa dia nanentsi-tadiny sy manao bontolo mbamin’ny amboletra hatrany ny fanamparam-pahefany.
Amin’izao fiandohan’ny volan aprily 2018 izao, hoy ihany ny fanampim-panazavany, ao anatin’ny fahatsiarovana ny RAaharaha 29 Martsa 1947 nanilihana ny mpanjanatany mivantana tamin’ny alalan’ny fandraisana anjaran’ny mpikambana Jiny notarihin’i Dadamonja, sy ny Raharaha 1 aprily 1971 izay nanoheran’ny Monima notarihin’i Dadamonja ny fanjanahan-tany tamin’ny endriny vaovao, ny birao foiben’ny Monima, izay nifamory dia mahatsapa mivantana fa tena itataovan-doza amin’antambo tanteraka i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy.
Mbola mitoetra ary mihamafy ny olana fototra miteraka ny fahantrana mihoa-pampana eo anivon’ny vahoaka, hoy ny Monima amin’izao fotoana, izay ivandravandran’ny tsy fananan’ny mpitondra fanjakana pôlitika ara-toekarena mazava, nefa ny olana hafa mianjady amin’ny fiainam-piaraha-monina manerana ny firenena, tsy ahitan’ny fitondrana vahaolana fa vao mainka miha-mafy sy miha-henjana. Milaza miara-mahita izahay raha manipika ny fihazakazaky ny fidangan’ny vidim-piainaa amin’izao fotoana, hoy i Gabriel Rabearimanana, nefa ny fahefa-mividin’ny isan-tokatrano tsy mitsaha-mitotongana.
Eo anatrehan’izany rehetra anefa dia tsy mitazam-potsiny na miraviravy tanana ny Monima, hoy ihany izy, ary efa noporofoiny nandritra izay 60 taona nisiany izay fa mijoro mandray ny tandrifin’andraikitra sahaza azy hatrany ny Monima. Mametraka ny lamina rehetra koa ny Monima mba hiatrehana ny fanohizana ny tolona efa nahabe voninahitra ny vahoaka malagasy, hoy hatrany ny Sekretera jeneraliny, ary manamafy ny rafitra ny antoko sy ny fanentanana ny vahoaka handray ny andraikiny hatrany. Ao anatin’izany rehetra izany no hahatsiarovan’ny Monima ny Raharahan’ny 1 aprily 1971 izay hatao hatramin’ny volana jona sy ny fahatsiarovana ny tsingerin-taona faha-60 nijoroany, ka hanaovana ny zaikabem-pirenena, hamolavolana hevitra hanavotana ny firenena.